Rio de Janeiro - I LOVE RIO- okuningiliziwe
Ukudla kuyingxenye eyinhloko zakhe isithombe isiko Carioca, ukudlala indima ebalulekile ekuphileni komkhaya ekuxhumaneni komphakathi, futhi wafakaza kwemvelo mlando komuzi.
Jewels Gastronomic at imigoqo, zokudlela kanye dinner namatafula ukumela umphakathi ocebile, yokulinga futhi ngamasiko basamukela. I LOVE Rio ezambula ezinye cuisine lekhethelo wakhonza zokudlela kulo lonke idolobha, kusukela omakhelwane acebile ukuba favelas. Umlando kanye nokuthuthukiswa elisisekelo Carioca izitsha abelethwe ngaphandle wasethula eceleni ngaphakathi nelungelo kokuxazulula namathiphu.
Umsuka, Amasiko, namaSiko Gastronomic
Imenyu Rio de Janeiro iMetropolitan ngokuyinhloko umkhiqizo indima ebalulekile ukuthi umuzi ayifeza emlandweni Brazil, edonsa futhi usihlanganisa namasiko kulo lonke futhi kusukela lonke jikelele.
Rio de Janeiro bekulokhu enhlokodolobha olusemthethweni umbuso futhi weRiphabhulikhi eminyaka, futhi ubelokhu enhlokodolobha de-empeleni waba kwezomnotho kanye nezamasiko Brazil for iningi ukhona. Ngokunjalo, umuzi phethwe osopolitiki, osomaqhinga, futhi royalties ngamunye ihamba izinto ezingafani nezifiso gastronomic, ezinomthelela cuisine wendawo.
Ngokufanayo, ngenxa yohwebo Rio umamukele inflow njalo abathengisi, abafuduki, abezombusazwe, futhi Abagibeli babewenzela kusukela yonke indawo emhlabeni - namuhla, gastronomy in Rio kuwumphumela iminikelo yabo abafanele.
Kanye kula mathonya, zanamuhla Carioca cuisine futhi ifaka seasonings zomdabu kanye zokupheka, azihlanganisa zombili amalungiselelo Afrika yasendulo futhi bendabuko namasiko Culinary isiPutukezi. Umphumela kuba ngcono izindlela ezivamile kanye kudalwa ezihlukahlukene izitsha ezintsha futhi eyingqayizivele, kanye nethonya elinamandla European.
Ithonya Indigenous nomthelela izithelo eziningi, imbewu, namantongomane ezifana cashew, umdumbula, i-taro, tamarind, cherry, palm, jaboticaba, Jambo, kanye sapodilla. Afrika ayephethe ukupheka in Brazil koloni, futhi yethulwa ubhontshisi, nemiculo kakhulu izitsha kazwelonke, eCayenne, amafutha omnqumo-palm, izimfanzi omisiwe, okwenziwe ngento efana namazambane, okra, futhi amakhambi ahlukahlukene asetshenziswa for isithokela - ezinye zalezi izindlela original Afrika namanje walungisa ngesikhathi kukhunjulwa ezibalulekile zendawo, ezifana Zumbi dos Palmares ngosuku.
Carioca okuningiliziwe ukweleta ePortugal iningi zokupheka zalo eziyisisekelo European for inyama kwasolwandle izitsha, salads, amasobho, uphudingi, futhi amaswidi dry - amaPutukezi bagqugquzela kakhulu ukusetshenziswa kakolweni nelayisi kanye yenkomo, iwundlu, ingulube, inhlanzi, amasobho, izithelo, nemifino.
Phakathi kweminyaka 450 edolobheni sika khona, Izakhamuzi Rio ba-ye basungula ukuvuleka emangalisayo Culinary, bawafaka amathonya, bathanda futhi yokwenza kusukela Afrika naseYurophu, ezifana feijoada, cod futhi izitsha eziningi okumnandi ezivela Northeastearn Brazil, uvumelane nezimo ukuba ukupheka Indigenous futhi izithako ezifana umdumbula zikakhukhunathi. Eminyakeni yamuva, ezixube amasiko Culinary international bagxilile, ezifana sushi Japanese, empanadas Mexican kanye crepe French.
Ibhayisikobho imigoqo ebukekayo futhi bejabule ngokuthi ukudayisa induduzo ukudla 'botecos' high-ekupheleni cuisine ocwaningayo, amapuleti bendabuko Brazilian ukuba exotic cuisine omhlaba, kukhona zokudlela beqalaza edolobheni ukuze ivumelane zonke kwemizwa nolwanga.
Ukuhwebelana kwembulunga yonke, futhi boom kwezomnotho yamuva Brazilian okwengeziwe ahlanganiswe amathonya Culinary angaphandle, futhi ngenkathi nokugcina okwakhe yayo, Carioca gastronomy manje kakhulu lubandakanye ezinye izindlela ngokuphawulekayo eyinkimbinkimbi. Okuningiliziwe Namuhla kufinyelele obaluleke kangaka Rio kuholele kudalwa ezihlukahlukene waminyaka yonke imikhosi Culinary imincintiswano ezifana Rio sika Festival Gastronomico, lo Degusta Rio, futhi ukusingathwa ngemihlaba 'Pasta Congress.
Cuisine Brazilian manje omunye acebe kakhulu emhlabeni, futhi ngesikhathi izitsha zesifunda ejwayelekile ziyahlukahluka kakhulu emikhawulweni Brazilian, eRio de Janeiro feijoada uyingqayizivele, kanye 'leão Veloso' nezimfanzi isobho.
Feijoada, dish Brazil kuzwelonke zafinyelela isimo kakhulu ejwayelekile dish kazwelonke kuba kabanzi kunazo eyaziwa ngaphandle of Brazil kanye olumelela cuisine Brazilian.
Kunezinhlobo ezine eziyinhloko lokuphekiwe in Rio de Janeiro - rodizios, churrascarias, ngamakhilogremu, futhi 'a-la-Carte'. Njengoba sazi yiluphi uhlobo lokudla, uhlobo yokudlela ngamunye unikeza take eyingqayizivele futhi nakho ngendlela izitsha bakhonza futhi ngajabulela.
Rodizios kukhona izikhungo kakhulu lapho intengo okuhleliwe icala futhi izifundo unlimited bakhonza etafuleni akukho zindleko ezengeziwe - iziphuzo, ikhofi, kanye nama-dessert ngokuvamile likhokhelwa eceleni. Rodizios abathandwa ngempela Rio, ngisho zokudlela njalo kungenzeka ukuguqula rodizios sonto-ekupheleni: eqinisweni, eziningana esungulwe kahle ephezulu zokudlela manje anikele rodizios ngesikhathi sekhefu amahora.
Ejwayelekile rodizio iminikelo zihlanganisa pizza, appetizers, pasta, futhi inyama. Ezindaweni touristy ezifana Ipanema futhi Copacabana rodizios sushi manje ngokuya kuyatholakala. Rodizios kungaba isukela Diners ezingabizi kakhulu futhi elula zokudlela eqolo futhi Posh.
Churrascarias kukhona uhlobo rodizio, kodwa ngokukhethekile zidayisa inyama kanye ngenxa ukuthandwa yabo ngokwedlulele ngokuvamile libhekwa ikilasi eyabo - kulezi zokudlela oweta ngokuqhubekayo eze amatafula sika izinhlobo ezahlukene inyama ngqo amapuleti amakhasimende '. A signal liphepha lelibovu futhi green sinikezwe amaklayenti ukuphawula oweta kubekhona ukugcina noma ayeke ukuza.
Churrascarias futhi anikele itafula lezitsha lapho amaklayenti kungaba self-ukukhonza ehlukahlukene eyengeziwe side izitsha ezifana imifino, pastas, risottos, breads, noshizi, ukusikeka amakhaza, amasobho, futhi condiments. High-ekupheleni churrascarias futhi ihlanganisa inhlanzi kanye sushi phezu kwetafula lezitsha - for vegans, kungenzeka ukuba ahambe abangane babo inyama-onothando futhi ujabulele inyama-free ukudla okugcwele nje nge side izitsha. High-ekupheleni churrascarias ukukhonza inyama ezikhethekile, ezifana unogwaja kanye nentshe at mali eyengeziwe, kodwa lezi izitsha kungenzeka kube phezu menu futhi kufanele ngqo wacela - iziphuzo, ikhofi, kanye nama-dessert never emananini fixed futhi ngokuvamile ezibizayo uma kuqhathaniswa intengo izifundo.
Ngamakhilogremu kukhona zokudlela lapho amakhasimende ukukhonza ngokwabo etafuleni main bese nesisindo emapuletini abo bese sizokhokhiswa ngendlela efanele ngesilinganiso. Ngamakhilogremu ngokuvamile anikele rate 'fixo', okuyinto ivumela servings unlimited ngentengo fixed - evamile lokhu rate akubonakali ngokuchachileyo noma zimenyezelwe futhi kufanele ngibuzwe mayelana. Ngamakhilogremu Iningi churrascaria eziyisisekelo kanye, ukunikela ezihlukahlukene nice inyama. Lezi ukusikeka kuvame akhiwe ngokuhlukile amatafula ukudla main, futhi inyama bafa futhi uzilungiselele oda.
High-ekupheleni ngamakhilogremu futhi anikele sushi njengengxenye lezitsha - kwalokho, bakwazi ukunikela sashimi salmon noma tuna, kodwa lezi kumele ngqo wacela futhi isisindo on a dish ehlukile, futhi akhokhiswa lelisetulu.
A-la-Carte yizona zokudlela ejwayelekile lapho izitsha oda menu esinqunyiwe - kukhona ezihlukahlukene olukhulu zokudlela a-la-Carte e Rio, ukukhonza izitsha esukela ejwayelekile waseBrazil ukuba wesimanje Asian, Fusion, Kwezinhlanga, futhi Vegan.
The zokudla ngamasiko ezihlukahlukene nemicabango 'a-la-Carte' ukuthi ziklele emigwaqweni komuzi esinye isibonelo esihle kakhulu lokusungula wendawo. Ukudla Japanese wafika ukuthutheleka elikhulu lezifiki Japanese in the kwekhulu lama-20 futhi kusukela yakhe abe kukho nemfashini phakathi Cariocas.
Cuisine French, zonke izinhlobo zawo futhi esiningi yinkimbinkimbi yayo, nakho okuye alemukela kanye izingalo gengelezi ngabantu Rio de Janeiro. Crepe zokudla emaningi khona, Futhi gourmet cuisine waseParis labangela ukuqala komkhakha ingatholakala eateries e Leblon and Copacabana.
Zokudla eziningi zinikeza izitsha kanye flavour ezivela emhlabeni Brazil, kanye ebanzi Ningizimu Melika, ukukhonza yokudla okumnandi Peruvian of Inca odabuka. Rio de Janeiro lamukele ezinye izitayela Culinary eminyakeni edlule, nge anhlobonhlobo imifino zikanokusho evelele futhi zokudlela vegan.
Ngo ukwazisa egcwele kokusondelana ezinkulu Cariocas 'nothando ukudla kanye umculo, imigoqo futhi zokudlela Rio evame Ziyathandelana ababili, ukuhlinzeka amakhasimende kanye ukusebenza bukhoma zomculo njengoba bedla. Iningi nemigoqo nemishiza ukuthi ziklele emigwaqweni omakhelwane ezifana Lapa sipho mesmerizing samba bubonisa ne amamenyu bendabuko eceleni.
In Rio de Janeiro, amasiko ocebile Culinary zomhlaba tho kanye twist playful, kwakheka kuphela ezihlukahlukene nemicabango Carioca menu.
Ngokuthi 'feijoada,' The Brazilian dish kazwelonke omnyama bean nesitshulu, equkethe kuze nantathu izinhlobo yengulube namasoseji ukusikeka, kanye nemifino ozikhethela. Izazi-mlando eziningi bakholelwa ukuthi sivela isitshulu kudliwe Southern Europe ngesikhathi ikoloni isiPutukezi. The ubhontshisi and inyama, iyisitshulu amahora, sicebile, alube futhi eyingqayizivele futhi zokudlela kulo lonke idolobha ukuncintisana ukukhiqiza isifanekiso esihle kakhulu of lesi sidlo Brazilian.
The izoso odumile waseBrazil, ngokuthi 'churrasco' wazalelwa isimo waseBrazil Rio Grande do Sul, a ukuphayona izinkomo umlimi uma wanquma hlupha inyama skewers sokhuni phezu komlilo, kuyolisiwe kuphela nosawoti indawo. Nakuba ngokuvamile barbeques liba emakhaya, eyosiwe inyama zokudlela ngiyithole ngempela Rio udumo lwayo. The 'rodízio' (rotation) uhlelo yilokho eboleka Churrascarias uhlamvu sabo esiyingqayizivele futhi likhange - umfudlana njalonjalo amnandi inyama ukusikeka balethwa amatafula amakhasimende 'asikiwe phambi kwamehlo abo, ephelezelwa kwaziswa side izitsha, salads, ehla, futhi sushi.
The isiPutukezi yethulwa izinkukhu eBrazil ngo kwekhulu lama-20 futhi aviculture ngasekuqaleni ezweni wayaziwa njengomuntu 'frango caipira', elisho 'inkukhu rustic'. Namuhla, Brazil ingenye exporteres elikhulu inkukhu inyama emhlabeni. Zonke yonkana Rio, umuntu angathola ubufakazi bokuthi Cariocas kukhona owazi kahle inkukhu labapheki futhi abathengi, futhi baye bazama ubuciko ofakwe, kanye ukusikeka ngobuchwepheshe eyosiwe. Ukuhamba imigoqo esidlule futhi izitolo, izakhamuzi nezivakashi basuke njalo bangibingelela iphunga ocebile futhi kujabulisa of uyakhafula-losiwe izinkukhu wonke.
Rio de Janeiro inomlando omude yokudoba, futhi ngesinye isikhathi aphethwe isihloko esiphezulu ukudoba yemikhiqizo yonke uthi. 'Bacalhau', noma Cod, kuyinto izinhlanzi ethandwa kakhulu eBrazil, futhi izwi manje libhekisela a delicately ayalolongwa dish kazwelonke, famously sijatshulelwe ngesikhathi sikaKhisimusi. Bacalhau wethulwa Brazil yinkantolo isiPutukezi ekuqaleni kwekhulu le-19.
An nani elihlaba umxhwele kwasolwandle ukudla zivela inyakatho-mpumalanga yeBrazil. 'Moqueca de Peixe,' nesitshulu inhlanzi evela izizwe zabomdabu Bahia, is ngokwesiko kuphekelwa esitsheni sebumba, lukakhukhunathi, amafutha esundu futhi lakhetsiwe choice izinhlanzi. 'Acarajé' isidlo Afrika-Brazilian eyingqayizivele ngokumangalisayo wenza bendabuko ubhontshisi black amehlo, onion, usawoti namafutha esundu, sokuqala esilotshwe Bahia ngo 1916. I izithako iphuma ibe ibhola, Kuthi a Falafel, okuyinto bese usika ngesigamu futhi wakhonza ukugcwaliswa pigweed, izimfanzi steamed, pepper kanye isaladi.
Cariocas simdumise ehla yabo, amaswidi kanye Ungadla, lapho kungatholakala cishe zonke bar, restaurant kanye ekhaya emzini. Bathi zidliwa ematafuleni nje mayelana bonke, ezitolo ezincane phezulu favelas, eyindida champagne sokudla esifundeni Posh Leblon. Omunye ethandekayo iningi Brazilian ehla elungisiwe iyona 'coxinha', a izinyembezi uphonsa emise, wagcwalisa inkukhu-, khekhe soft, camera isinkwa-imvuthu, kuthiwa livela São Paulo ngasekupheleni Century 19. Side eceleni ne coxinha, eyodwa njalo ukuthola okunezinhlobonhlobo eziningi 'Pasteis', noma ehla. Lezi zigcwele kokubili ofakwe bendabuko kanye wesimanje, kuhlanganise ngokuvamile ushizi, ham, inyama nengulube futhi Prawn.
'Brigadeiro' yilona archetypal Brazilian sweet - isivakashi ohlehlela at nalelo qembu kanye uswidi ethandwa in namakhabethe Cariocas '. It is a truffle soft and nokuzitika kumiswa wafingqa ubisi, ushokoledi kanye ibhotela, camera sprinkles. Igama lisho, 'kusho uBrigadier', njengoba intela uBrigadier Eduardo Gomes ebiza for uMongameli weRiphabhliki 1946 Sweet and Ungadla elungisiwe kukhona ngezindlela eziningi okuyisisekelo ekudleni Brazil ian, futhi into Cariocas bazizwa iqholo mayelana.
Noma ngokuvakashela Rio de Janeiro uzobe wabingelela ngumuntu 'caipirinha' kujabulisa - cocktail lodumo Brazilian ezenziwe lemon, ice nechobozekile, ushukela kanye 'cachaça,' umoya umoba. Kukhona esonta esimnandi zakudala, besebenzisa vodka esikhundleni cachaça kanye passion izithelo, kiwi noma umango esikhundleni lemon.
Izithelo iminikelo eBrazil ezinye Sweetest futhi amnandi kakhulu emhlabeni wonke. Ngokuthi 'sucos', kukhona ezihlukahlukene omkhulu asanda ezenziwe neziphuzo zezithelo on sipho e Rio: kusukela orange yendabuko kanye apula, ukuze okukhethwa elishisa kakhudlwana ugwava, sasigaya upopo, umango futhi jackfruit. Izithelo ayo kukhona izakhi athandwa kakhulu Carioca adla futhi aphile ngayo. Amanzi Coconut yiyona darling of izakhamuzi Rio, futhi zingathengwa kunoma yimuphi elingasogwini esitodlwaneni noma emgwaqweni othengisa.
'Acai' kuyinto 'super-ukudla' lodumo tropical lapho ingagxila eziningi izinhlobo ezihlukene, ezihlanganisa ayo, smoothies and sorbets - ngokuvamile afafazwe granola sweet and ezinoshukela, banana, strawberry kanye noju.
Kungakhathaliseki ukudla noma senzakalo, ubhiya bekulokhu isiphuzo esiyingqopha Rio okwesikhathi eside, lapho amarekhodi lokuqala ukusetshenziswa kwalo date emuva Ekhulwini le-17. Namuhla, emibuthanweni yokuzijabulisa sonke big, amaqembu street nasezigcawini kuyachwaza, abathengisi emgwaqweni ukudayisa amathini kanye amabhodlela kusukela big, ephathekayo amabhokisi ice futhi bendawo umi. Ngokwesiko, njengoba ebalulekile njengoba ukwakheka ubhiya, unjalo temperaure yayo: the the zasebusika kangcono!
I LOVE Rio inikeza ezinye izindlela abachwepheshile, kuhlanganise nayo yonke izithako ezidingekayo, lapho zingase itholakala, futhi ukulungiselela kanjani upheke nabo Finesse a abanamakhono Carioca chef.
Kanye cuisine bendabuko, ezifana feijoada futhi elungisiwe ehla, I LOVE Rio uya amshiya lowa ukuhlola ezinye izindlela okumnandi okuye besuka uthi enyakatho, eningizimu futhi ingaphakathi of Brazil, kanye awukudla sweet and kufihlwe Carioca amagugu Culinary.
Ungadliwa and Ukudla
Umsuka Kanye Izitayela
Arcade and Ukuba
A isethuloRio de Janeiro nge nencazelo zokuhlalisana, zamasiko nezomlando zonke izici ezenza emzini gem amahle eyingqayizivele ukuthi namuhla.
Yakhelwe for izinga ezokuvakasha, I LOVE RIO kuyinto ukungcebeleka virtual kanye amakhona eziningi Rio ukuthi, ngoba ukuntuleka isikhathi noma ithuba, angeke ngokuqondile olutholwa iningi izivakashi.
I LOVE RIO portfolio imikhiqizo, ngamunye usebenzisa indlela ehlukile ukukhuthaza image kanye isiko Rio de Janeiro.